Nyowani Rolls-Royce Yese-Magetsi Ndege Chaiyo Inoenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nyowani Rolls-Royce Yese-Magetsi Ndege Chaiyo Inoenda
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • ushanyi • kutakura • UK Kuputsa Nhau
Rolls-Royce dzese-dzemagetsi ndege
Iyo saiti: iyo UK Ministry yeDziviriro Boscombe Pasi. Iyo nguva yekufamba: maminetsi gumi nemashanu. Ndege: Rolls-Royce ese-emagetsi mweya weInnovation. Mhedzisiro yacho: rimwe danho rakakosha rekufamba kwemhepo kwakatemwa.
Rolls-Royce akaita kumwe kuyedza kurekodha kwepasi nendege yayo yemagetsi.
Iyi yekutanga ndege iri kupa iyo kambani mukana wekutora akakosha mashandiro wedhata pane iyo magetsi's magetsi magetsi uye propulsion system.
Mukuvandudza inzira yakakwana yemagetsi yekufambisa kwepuratifomu yayo, ingave iri yemagetsi kusimuka kusimuka uye kumhara (eVTOL) kana ndege dzevapfuuri.
Rolls-Royce yazivisa nhasi kupera kwendege yekutanga yeavo-magetsi Mweya weInnovation ndege. Na14: 56 (BST) iyo ndege yakaenda kumatenga inofambiswa neiyo 400kW (500 + hp) powertrain yemagetsi ine bhatiri rakasimba kwazvo rakambounganidzirwa ndege. Iri raive rimwe danho rekuyedza kuyedza kwepasirese kwendege uye rimwe danho rakakosha parwendo rweindasitiri yendege yakananga kudecarbonisation.
Warren East, CEO we Rolls-Royce, akati: “Kutiza kwokutanga kwe Mweya weInnovation chiitiko chikuru cheACCEL timu uye Rolls-Royce. Isu takanangana nekuburitsa tekinoroji budiriro nzanga inoda decarbonize zvifambiso pamhepo, pasi, uye gungwa nekutora mukana wezvehupfumi wekuchinja kune zero zero.
“Izvi hazvisi zvekutyora pasi rose chete; bhatiri repamberi uye tekinoroji yekushambadzira yakagadzirirwa chirongwa ichi ine maficha anonakidza emusika weUrban Air Mobility uye inogona kubatsira kuita kuti 'jet zero' ive yechokwadi. ”
Secretary of UK Bhizinesi Kwasi Kwarteng akati: "Kubudirira uku, uye marekodhi atinotarisira kuti achatevera, zvinoratidza kuti UK inoramba iri pamberi pamberi pehunyanzvi hwekugadzira nzvimbo. "Nekutsigira mapurojekiti akaita seuyu, hurumende iri kubatsira kufambisa muganhu, kusundira matekinoroji ayo achasimudzira kudyara nekuvhura ndege dzakasvibira dzinodiwa kuti tigumise mupiro wedu mukushanduka kwemamiriro ekunze."
Munguva iyi yekutanga kubhururuka, Rolls-Royce ichave ichiunganidza data rinokosha rekuita pasimba remagetsi nendege yemagetsi. Iyo ACCEL chirongwa, ipfupi kune "Kukurumidzisa iyo Electrification yeNdege," inosanganisira vakakosha vanobatana YASA, yemagetsi mota uye mutongi anogadzira, uye avhiyesheni kutanga-up Electroflight. Chikwata cheACCEL chakaramba chichivandudza zvichinamatira kuHurumende yeUK kusimudzira munharaunda pamwe nemimwe mirayiridzo yehutano.
Hafu yemari yeprojekti inopihwa neAerospace Technology Institute (ATI), mukubatana neDhipatimendi reBhizinesi, Energy & Industrial Strategy uye Innovate UK.
Mukuru weAerospace Technology Institute, Gary Elliott, akati: "ATI iri kupa mari muzvirongwa zvakaita seACCEL kubatsira UK kuvandudza hunyanzvi hutsva uye kuwana hutungamiriri muhunyanzvi huchaita kuti ndege ifambe. Tinokorokotedza munhu wese akashanda muchirongwa cheACCEL kuti ndege yekutanga ive yechokwadi uye tinotarisira kuyedza yekumhanyisa kwepasirese kuzobata fungidziro yeruzhinji mugore iro UK inobata COP26. Kubhururuka kwekutanga kweMweya weInnovation kunoratidza maitiro tekinoroji inogona kupa mhinduro kune mamwe matambudziko akakura pasi rose. ”
Iyo kambani iri kuvumbirira vatengi vayo yakakwana magetsi ekufambisa system yepuratifomu yayo, ingave iri magetsi emagetsi kusimuka uye kumhara (eVTOL) kana ndege dzinofamba. Iyo kambani ichave ichishandisa tekinoroji kubva kuACCEL chirongwa uye kuchizoshandisa kune zvigadzirwa zvemisika iyi mitsva. Hunhu hunodiwa ne "air taxis" kubva kumabhatiri hwakafanana chaizvo nezviri kugadzirirwa iyo Mweya weInnovation, kuitira kuti igone kusvika kumhanya kwe300+ MPH (480+ KMH) - inova ndiyo tarisiro yepasirese kuyedza kuyedza. Uye zvakare, Rolls-Royce uye airframer Tecnam parizvino vari kushanda naWiderøe, nendege yedunhu muScandinavia, kuendesa iyo-yemagetsi ndege yevatakurwi kumusika wevatariri, iyo iri kurongerwa kuve yakagadzirira basa remari muna 2026.
Rolls-Royce yakazvipira kuona kuti zvigadzirwa zvayo zvitsva zvichaenderana net zero zero kushanda na2030 uye zvigadzirwa zvese zvinowirirana net zero na2050.